Atileet Qananiisaa Baqqalaa: ‘Namni jiraachuu barbaadu of eeggannoo guddaa gochuu qaba’ – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAtileet Qananiisaa Baqqalaa: ‘Namni jiraachuu barbaadu of eeggannoo guddaa gochuu qaba’
(bbcafaanoromoo)–Ummanni qajeelfamtoota ogeeyyiin fayyaa koronaavaayirasii irratti kennan hojiirra oolchaa hin jiru jechuun atileetiin fiigicha fageenya dheeraan maqaa guddaa qabu Qananiisaa Baqqalaan BBC’tti hime.
Qananiisaan turtii BBC waliin taasiseen, murteen Atileet Daraartuu Tulluun yeroo dhukkubni addunyaa yaaddesse kanatti qophii Olompikiitiif atileetonni hoteela akka hin seenne jettees sirruma ture jedheera.
”Ummanni addunyaa akka baalaatti harca’aa jiru kun kun garaa nama hin nyaatu?” kan jedhu Qananiisaan, kanaafuu ummatni hundu ittigaafatamummaa of eeguu qaba. Garuu, kuni ta’a hin jiru jechuun yaadda’eera.
”Ummanni of dagachuun gorsa kennamu yoo waan of gatu ta’e rakkina guddaatu biyya irratti uumamaa deema. Ummatnis rakkina hin taane keessa seena,” jechuun hima.
Bu’uraaleen fayyaa Itoopiyaa keessa jiran guddaa waan hin taaneef ‘ummatni kana beekee gorsa kennamu dhaggeeffachuutu isaanirra jira jedha.
”Namni abdii fulduraatti qabu namni jiraachuu barbaadu hundi ofiifi maatii saatiin of eeggannoo guddaa godhuu qaban jedha,” jechuun fayyaa yoo qabaatan lubbbuun yoo jiraatan wanta baay’ee hojjechuun danda’ama jechuun hima.
Qananiisaan akkamiin of eegaa jira?
Qananiisaan gamoo bakka leenjii atileetiksii Sulultaatti qabu tokko bakka namoonni dhukkuba kanaan shakkaman itti tursiifaman akka ta’u gumaacheera.
Gama isaatiin, erga koronaavaayirasiin biyya seenee eegale shaakallii qofaa isaa taasisaa jira jedheera.
Gorsa ogeeyyii fayyaa, kan mootummaan baaseefi Dhaabbata Fayyaa Addunyaa irraa kennamu hordofaa akka jiru dubbata.
”Ummanni tokkoon tokko of eeggannoo guddaa godhe dhukkuba kana to’achuun ni danda’ama,” jechuun namuu yoo of eege tatamsa’ina isaa to’achuun akka danda’amu hima.
Maloota dhukkuba koronaavaayirasii ittisuuf gorfaman keessaa tokko harka wal fuudhuu dhabuufi walirraa fagaachuudha.
Ta’us, kana hojiirra oolchu irratti ammallee hedduu akka hafu Ministirri Muummee Abiy Ahimad dhiheenya ibsuun isaanii ni yaadatama.
”Ummanni baay’inaan hin dhagahu. Akka taphaatti ilaala wanta kana,” jechuun Qananiisaanis waan isa mudate hima.
”Kan harka si qabachuuf sitti deemanitu jira. Kaan ammoo wajjiin footoo haa kaanu jedhee nama sitti deemutu jira. Kuni rakkisaadha. Yeroo ati hin ta’u jettu kan sitti aarutu jira.”
Kun hidhata aadaa keenyaa qabaatulleen, ummanni hanga dhukkubni kun to’atamutti murteewwan darban akka kabajamu gaafateera.
‘Daraartuun sirriidha, kaanitti gaddeera’
Boordiin Koree Olompikii Idl- Addunyaa murtee xumuraa olomikii irratti hin dabarsiin dura ture Koreen Olompikii Itoophiyaa atileetonni hoteela seenuun olompikiif akka qophaa’an kan murteesse.
Murtee kana garuu, pirezidantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Atileet Daraartuu Tulluu yeroo koronaavaayirasiin tatamsa’etti ta’u hin qabu jechuun mormite.
Atileet Haayilee G/Sillaaseefi G/Igzaaber G/Maariyaam pirezidantii Koree Olompikii Dr Ashabbir W/Goorgis waliin goranii turan.
Dhimma ijoo dubbii ta’e irratti kan gaafanne Qananiisaan, ”Durumaan dursee wanta sirrii hin taane. Gorsa Dhaabbata Fayyaa Addunyaa kenneen kan walitti bu’udha. Akka nama tokkootti anis baay’ee itti gaddeen jira,” jedheera.
”Ummanni biraa beekuu baachuu danda’a. Atileetota tokko tokko ta’u qaba jedhanii murteessan baay’ee itti gaddeen ture.
”Amma garuu sanis ta’e kanas dorgommiin darbee jira. Garuu taajjabbii guddaa dabarseen jira bakka kana irratti.
”Daraartuun ejjoonnoo isheetiin guutummaan guututti sirriidha. Ani dhaamsa Daraartuun fudhadha. Kan jaroota kaaniitii miti,” jechuun Qananiisaan BBC’tti hime.
Dorgommiin Olomikii atileet Qananiisaa Baqqalaaf haaraa miti. Lammiin Itoophiyaa waltajjii kana irratti guddaa hin milkaa’e isa malee kaan hin jiru.
Yeroon olompikichaa dheereeffamunsaa dhiibbaa wayi akka isarratti qabaatu gaaffii dhiyeesineef, amma umuriin isaa 38 guutuufan. Kanaafuu, Olompikiin waggaa tokko achi siiquun isaa garuu nan yaaddessu jedha.
”Waggaan tokko, lama baay’ee miti. Umuriin kiyya ganaadha. Nan qaqqaba. Yaada kiyya galmaan gahuu nan danda’a.”
Kana malees tibba kanatti dorgomiichi dabarfamu isaatti akka gammadee himeera.
”Kan Rabbi jedheetu ta’a malee kan namni jedhe hin ta’u yeroo hundaa,” jechuun dhukkubni addunyaa yaaddesse kuni akka baduf ummanni Waaqa akka kadhatu dhaama.
Doktooroota Oromoo hospitaaloota Amerikaa keessumaa naannoo Chikaagottti dhukkubsattoota wal’anaaturan keessaa Dr Ibraahim Amee Elemoo tokko.
Namoota vaayrasii koronaan qabaman gargaaruun maal akka fakkaatu ibsuu.
Weerarri vaayirasii Koroonaa Dinagdee irratti dhiibbaa attamii qaba?
Dhimma kanaa fi kan biroo irratti Jawar Mahaammad sa’aatii 11:00 (Akka lakkoofsa Itoophiyaatti) irrattti qabannee dhihaanna. Akka hordoftan isin affeerra.
ስለ ጊዜው ጉዳይ ለፈጣሪ መስጠት ብቻ ነው መፍቴው
Waqafi wanti martu salphadha
Maaskii keewwatanii nyaata namaaf hiruu!! gloves!
Qeerroon Oromoo Wayyaanee buqqisuu keessatti qooda olaanaa qaban baay’een godinoota hedduu keessatti ammas mana hidhaa jiru. Maqaa koronaatiin ”hidhamtoota hiiknee gadhiifne” jechuun hattuu fi kashlabbee kaayyoo hin qabne qofa gadhiisanii ilmaan biyyaa kaayyoof gatii baafte diineffatanii ammas adabaa jiru
Baalee Bahaa magaalaa Gindhiir keessatti Qeerroowwan kunneen badii tokko malee eega mana hidhaa Magaalaa Gindhiiritti darbamanii baatii lamaa ol lakkoofsisanii jiru, Qeerroowwan tun waan balleessan osoon qabne dararamaa jiru, garaagarummaa yaadaa jiruuf jecha Kaadreen PP magaalaa Gindhiir keessatti Qeerroo isintu gurmeessee nutti kaasaa jira jetteenii badii malee hiitee mirga isaanii sarbaa jirti, Ijoolleen tun yakka kamuu irraa bilisa akka tahan Warroonnii itti dhiheenyaan beekan ni himu, Tahus kunoo Kaadreen PP eega mana hidhaatti dabritee guyyaa tokkos mana Murtiitti osoo hin geeffamin manuma hidhaa keessa tursiifamaa jiru, achumattuu dararaan nurra gahaa jiru jedhu, halkan halkan poolisoonni akka tuman himatu, Kun seera eegsifna jechaa nama badii malee hidhanii ofumaaf ammas mirga namaa fi seeras Cabsuu taati.
Yeroo Mootummoonni Addunyaa namoota yakka gurguddaan himamanii mana sirreesaa keessa jiran balaa yeroo ammaa Addunyaa mudataa jirtu tan Covid-19 Vaayirasiin Koronaa lubbuu namaa galaafataa jiru sababeeffachuun yakka isaanii irraa kaasee bilisaan gadi Lakkisaa jiru kanatti Ijoolleen tun ammas Mana Hidhaa Magaalaa Gindhiir keessatti dararaan irra gahaa jira, Mana hidhaa keessattis Vaayirasiin Koronaa kun carraa daddarbuu hamaaf akka nama saaxilu beekkamaa dha. Qeerroowwan kun Anesso Waaree, Borshaa Awwal fi akkasuma kan sadaffaa ammaaf maqaa isaa beekuu kan hin dandeenye dha.
Kanaaf Bulchiinsi Baalee Bahaa garaagarummaa yaadaa jiru moggaatti dhiibuu dhiisanii ijoollee tana hatattamaan akka gadi dhiisu kabajaan gaafanna.
Vaayiresii Koronaa(COVID-19) ilaalchisee ibsa Baankii keenya irraa kenname
ወቅታዊውን የኮሮና ቫይረስ (COVID-19) አስመልክቶ ከባንኩ የተዘጋጀ ማብራሪያ
• Koroonaavayirasiin eessaa ka’ee as gahe?
• Atileet Qananiisaa Baqqalaa, ‘‘Atileetota tokko tokko taajjabe” jedha
• Barsiisaa waggaa 10 dura harka nama fuudhuu lagatan
• Naannoon Oromiyaa Covid-19 ittisuuf hangam qophiidha?
• Turtii Hogganaa Biiroo Fayyaa Oromiyaa waliin